Farmaajo oo go'aankiisa ku aadan kiiska Badda u sheegay Qaramada Midoobey - BBC News Somali
Farmaajo oo go'aankiisa ku aadan kiiska Badda u sheegay Qaramada Midoobey
26 Sebtembar 2019
Madaxweynaha dowladda Federaalka ee Soomaaliya oo hadal ka jeediyay kullanka 74-aad ee Qaramada Midoobeey ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid tahay khilaafka kala dhexeeyo Kenya.
"Iyadoo dowladda Soomaaliya ay dhiiragelineyso isdhexgalka ganacsig ee gobolka ayna bulshada ganacsatada Soomaaliya ay ku boorineyso in ay maalgashadaan dalalka Bariga Africa, waxay Somalida sii wadaan in ay dhaqaale geliyaan Jamhuuriyadda Kenya taas oo gacan ka geysata koboca iyo barwaaqada dhaqaale", ayuu yiri madaxweyne Farmaajo.
Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa isku haysta xuduudda dhanka badda, taas oo sababtay in kiis ay Soomaaliya u gudbiso maxkamadda Cadaaladda Caalamka ee ICJ sannadkii 2014-kii.
Balse madaxweynaha Soomaaliya ayaa Qaramada Midoobeey ka sheegay in "Soomaaliya iyo Kenya oo xuduud ka wadaaga dhanka bad-weynta Hindiya, ay ku naaloon doonaan xiriir saaxiibtinimo oo nabad ah".
"Wadahadallada laba geesoodka ahaa ma guuleysan, iyo heshiisyadii hore. Si loo helo nabad iyo xal kama dambeys ah, sannadkii 2014-kii, Soomaaliya oo raaceysa xeerka caalamiga ah waxay dacwad u gudbisay Maxkamadda Cadaaladda ee Caalamiga ah".
Khilaafka Kenya iyo Soomaaliya ee dhanka xuduudda wuxuu sababay in xiriirkii diblumaasiyadeed ee labada dhinac ka dhexeyay uu go'o iyadoo tallaabooyiin adag ay is dhaafsadeen.
Kenya ayaa dooneysa in wadahadal lagu dhammeeyo arrinta, sida ay muujiyeen madaxda dalkaas, taas oo Soomaaliya ay diiddantahay.
Kiiska oo dhageysigiisa ay maxkamadda billaabi lahayd horraantii bishan September, ayey Kenya dalbatay in dib loogu dhigo sababto la xiriira qorshada qareeno dheeraad ah, sida ay qoreen warbaahinta dalkaas. ICJ ayaana go'aamisay in dacwadda labada dal la qaadi doono 4-ti bsiha November ee sannadkan.
Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxay sheegtay in ay ka soo horjeesatay dalabka Kenya oo markii hore lagu sheegay "in uu ahaa sannad in dib loo dhigo".
"Soomaaliya oo xubin ka ah Qaramada Midoobeey, kana mid ah saxiixayaasha maxkamaddan, waxaa ka go'an in la arko xalkan maxkamadeed inuu dhammaadka gaaro."
"Soomaaliya waxay ballan qaaday in ay u hoggaansanto go'aanka ugu dambeeya ee maxkamadda, ayna aqbasho xuduudda ay Maxkamadda jaangoyso", ayuu yiri Farmaajo.
"Wuxuu go'aanka maxkamadda sidoo kale qabanayaa Kenya", ayuu hadalka ku daray.
Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa horey u kulansiiyay labada madaxweyne, kaas oo lagu gaaray heshiis balse markii dambe fashilmay.
Hadda intii ay ku sugnaayeen magaalada New York, waxaa labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya kullansiiyay madaxweynaha Masar Cabdifitaax Al-Sisi oo sidoo kale ah gudoomiyaha Midowga Afrika.
Siddeed marxaladood oo muhiim ah oo uu soo maray muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya
Afhayeenka madaxweyne Farmaajo, Cabdinuur Maxamed ayaa kullankaas Al-sisi ka dib, bartiisa Twitter-ka ku qoray "Waxaan isku afgarannay soo celinta xiriirka iyadoo caqabad aysan ku yeelan kiiska maxakamadda ICJ ee badda".
Kenya ayaa dhankeeda sheegtay in madaxda Afrikaanka ay isla soo hadal qaadeen danaha ka dhaxeeya dalalka iyo guud ahaan qaaradda Afrika.
"Madaxweyne Kenyatta waxaa uu Madaxweyne Al Sisi uga mahadceliyay shirka, wuxuuna sheegay in Kenya ay marwalba u ololeyso wadaxaajood , ayna u ololeyn doonta wadahadal, iyadoo laga duulayo joogteynta isdhexgalka qaaradda Afrika", ayaa lagu sheegay war qoraal ah oo lagu daabacay bogga madaxtoyada Kenya ay ku leedahay Facebok.
Madaxweye Kenyatta waxaa uu carabka ku adkeeyay in ka qaarad ahaan, Afrika ay marwalba raadiso xalka dhibaatooyinka heysta Afrika.
Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya, Monica Juma ayaa barteeda Twitter-ka ku qortay : "Kenya waxay soo dhoweyneysaa kullankii ugu horreeyay ee dhanka saxda ah loo qaaday. Kenya markasta way aaminsan tahay, wayna sii wadeysaa in ay ku baaqdo in loo wadahadlo qaabka ugu wanaagsan oo xal Afrikaannimo ah loogu dhameynayo dhibaatada Afrika"
Lix go'aan oo ay qaadatay dowladda madaxweyne Farmaajo ee aan horay loo arag
Xiriirka Kenya iyo Soomaaliya: Farmajo ma wuxuu ku fashilmay waxyaabihii uu maareeyay Xasan Sheekh?